Vanhu vaviri vakaurawa, vaviri vakakuvadzwa muArizona Amtrak kupfura
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » mhosva » Vanhu vaviri vakaurawa, vaviri vakakuvadzwa muArizona Amtrak kupfura
Kuputsa Kufamba Nhau • mhosva • Hurumende Nhau • nhau • vanhu • Rail Kufamba • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau
Nhengo dzevashandi vemudunhu rezvinodhaka pamwe nevemunharaunda nevezvematongerwo enyika, vanga vachiitisa chitima chakamira pakapfura.
Vezvemitemo vanochengetedza mapurisa vaiitisa ongororo yechitima cheAmtrak pakaitika kupfura.
Mumwe wezvemitemo uye anofungidzirwa kupfura akafa mukupfura kuchiteshi chechitima cheTucson.
Hapana kufa kana kukuvara kwakataurwa pakati pevane 137 vafambi vezvitima uye gumi nenomwe vevashandi vezvitima.
Kupfura mukati mechitima cheAmtrak kwakamira pachiteshi chechitima cheArizona kwakasiya vanhu vafa uye vaviri vakakuvara.
Vakuru vemauto ekumanikidza vakakwira chitima cheNewtrle-yakasungwa Amtrak kubva kuLos Angeles yakamira pachiteshi chiri mudhorobha reTucson kuitisa cheki chenguva dzose pfuti zvisiri pamutemo, zvinodhaka nemari.
Vezvemitemo vakasangana nevanhu vaviri padanho repiri rechipiri-decker chitima uye vaiyedza kusunga mumwe wavo, apo nyongori akaburitsa pfuti ndokuvhura pfuti.
Mumwe weDrug Enforcing Administration (DEA) mumiririri akaurayiwa mukupfura, uye mumwe mumiririri akakuvadzwa uye ari mune yakaoma mamiriro. Mupurisa weTucson uyo akamhanyira kunobatsira mushure mekunzwa pfuti dzakadzingwa akakuvarawo, asi ari mugariro wakanaka.
Mushure mekuchinjana pfuti nemapurisa, mupfuri akazvidzivirira mukati mechimbuzi chechitima. Pakupedzisira, vatevedzeri vemitemo vakaona kuti munhu aifungirwa muchimbuzi aive akafa. Hazvina kujeka panguva ino kuti vamiririri vakamupfura here kana kuti akazviuraya.
Hapana kukuvara kwakamhan'arwa pakati pevapfuuri zana nemakumi matatu nenomwe nevashandi gumi nevaviri vaive muchikepe Amtrak chitima avo vakabviswa pachiteshi.
Mupomeri wekutanga akachengetedzwa anoramba ari mumaoko emapurisa. Hapana vanofungidzirwa vakaonekwa nevakuru vemitemo.